Matriks PowerWatch X, ihe mbụ smartwatch nke na-arụ ọrụ na ahụ anyị na-ekpo ọkụ | Akụkọ akụrụngwa
Ee, ị gụwo isi okwu nke isiokwu a nke ọma. Rixlọ ọrụ Matrix amalitela ire nkeji izizi nke Matrix PowerWatch X smartwatch, smartwatch nke na-enweghị batrị enwere ike ịbugharị site na chaja, ebe ọ bụ na A na-ahụ ebe o si nweta ume na okpomọkụ sitere na ahụ anyị.
Ihe Nlereanya a na-eji teknụzụ thermoelectric nke ụlọ ọrụ nwere ma nwee ike nweta ume site na okpomoku anyi ịbụ naanị smartwatch dị ugbu a na ahịa nke na-egosikwa anyị ọkwa sitere na smartphone, na-achọpụta ọrụ anyị ...
N'ime PowerWatch X, anyị na-ahụ sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ mekwara maka ngwaọrụ ndị nwere ike weara, na onye oriri dị oke ala, nke ọ nwere ike nyochaa ọrụ na izipu ozi na anyị na-enweta na ama anyị n'echeghị oge ọ bụla maka ịwe batrị ihe ọkụ ahụ anyị na-enye.
Igwe ọkụ thermoelectric dị na smartwatch a na-arụ ọrụ nke ọma karịa nke anyị nwere ike ịchọta na ngwaọrụ / ngwaahịa ndị ọzọ. Ke adianade do, dị ka emeputa, a smarwatch nwere ịrụ ọrụ nke ọma na-agbanwe agbanwe Ejiri batrị ya n'ụzọ dị oke ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma.
PowerWatch bụ rna-eguzogide omimi nke ihe ruru 200 mita a na-ejikwa ya mee nke aluminom nke na-enye anyị nnukwu nguzogide. Mgbe anyị kwụsịrị nche, iji hie ụra dịka ọmụmaatụ, ọnụ na-abanye n'ọnọdụ ihi ụra, a na-arụgharịkwa ya ozugbo anyị tinyere ya n'aka anyị. Smartwatch a nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ụra maka afọ abụọ.
N'oge a PowerWatch X Ọ dị naanị na United States na ọnụahịa nke $ 279, ọnụahịa karịrị nke a gbanwere maka uru ọ na-enye anyị, na-ekwughị na anyị ekwesịghị iwepụ ya n'oge ọ bụla iji kwado ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Matrix PowerWatch X, smartwatch mbụ nke na-arụ ọrụ na ahụ anyị na-ekpo ọkụ
Microsoft na-achọ ime ka usoro jụrụ oyi nke ebe data ya dịwanye mma site na itinye ha n'okpuru osimiri